भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: July 2007
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:15 AM2comments:
त्यसो त प्रत्येक बर्ष जनै पुर्णिमाको दिन अर्थात आउने भदौ ११ गते मँगलबारको दिन गोसाईकुण्डमा लाग्ने मेलामा हजारौ तिर्थयात्री आउने छन। स्याफ्रुबेसीबाट भने हिडने यात्रा हो त्यो मेला, सुने अनुसार करीब २५ हजारजना आउनेछन् यो सिजनमा ।भर्खरै त्यहा पुगेर आएका किसन र उनका साथीहरुको तस्बिर सहित केही अनुभव पनि सुनौ न ।
..........गोसाईकुन्ड यात्राको पहिलो दिन हामी निक्कै हिँड्यौँ। राती आठ बजे हामी ढिम्साको उकालो लाग्दै थियौँ।थकित साथीहरु हिँड्न सकेनन्, अझ हामी टर्च लाइट बिना थियौँ।चन्दनबारिमा होटल देखेपछि मात्र हामीलाई ढुक्क भयो।........
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:42 AM No comments:
एक शताब्दी भन्दा पुराना शिलालेखहरुको हेरचाह गर्न नेपालको सीमा क्षेत्रमा कुनै सुरक्षा शतर्कता देखिएन ।
रसुवागढीबाट १ घण्टाको हिडाईमा पुगिने टिमुरेमा सेना र प्रहरीको क्याम्प छ भने यहा रहेको भन्सारलाई पनि सारेर स्याफ्रु झारिएको छ ।
त्यत्रो १५२ बर्ष पुरानो ईतिहास हेर्न पुग्दा प्राप्त मजा त्यसको हिफाजतको कुनै ब्यबस्था नहुदा भने मन खिन्न हुन्छ ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:07 AM 1 comment:
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:31 AM No comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:01 AM 1 comment:
Posted by Reality Bites, Nepal at 8:38 AM 1 comment:
राजाको जन्मोत्सबको दिन पुगियो चिन्, यो यादको लागी मात्र । यो खोला पारी चिन हो जहा एकमात्र घर छ तर नेपालमा भने एकघन्टा पछाडीमात्र टिमुरेमा बस्ती छ ।
पहिला पहिला नेपालको सिमानामा भन्सार थियो तर अहिले स्याफ्रुबेसीमा सरेको छ । र त्यो पुरानो रसुवागढीको भन्सार कार्यालयको भित्र पटि देखिएको नेपालको झण्डाले मनै रुवाउछ ।अनि कसरी गर्ने त सीमा नियन्त्रण !!??
Posted by Reality Bites, Nepal at 7:40 PM No comments:
माथिको लाङ्टाङ्र अर्को भोटेकोशी खोलाको मिलनबिन्दु यो स्याफ्रुको बनोट हेर्दा लाग्छ, धेरै पहिले देखि यो गाउ सहर हुने दौडमा छ । गल्छिबाट ९० कि मी धुन्चेको यात्रा लाई छोट्याएर अब त त्रिसुली खोला मैलुङको बाटोमा त रसुवागडी-स्याफ्रु-गल्छि नै ९० कि मी होला जस्तो छ । यो छोटो दुरीले त चिन भारत बिच एकदिनमै पुगेर फर्किन भ्याईने हुनसक्छ, यदि साच्चै राजनितिक स्थिरता भयो भने, हैन र?अनि म स्याफ्रुबेसी अनलाईनमा तपाईसँग कुरा गरुला नि !!
Posted by Reality Bites, Nepal at 9:34 AM No comments:
साच्चै यि र यस्तै बालकहरुको लागि नै भएपनि मँसिर ६ गतेको सँबिधानसभाको चुनाव हुनुपर्यो । कमसेकम के कुरा पक्का हो भने आत्मनिर्णय सहितको सँघीय लोकतान्त्रिक शासन् नै अहिले आवश्यक छ । यो बालकले आफ्नो भविष्य खोजीरहेको छ । र उ अब आफ्नो उज्वल भविष्यको नजिकै पुगेकोमा पो मुस्कुराईरहेको त होइन ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:18 AM 1 comment: